Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Tijaabada Neefsashada ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabooyinka Neefsashada
Imtixaannada Neefsiga ee duubista nidaamka kormeerka waxay ku saleysan tahay aragtida hurdada ee ugu dambeysay, iyo mabaadi'da naqshadeynta xasilloonida, saxnaanta, waxtarka iyo roonaanta, laga soo bilaabo aragtida isticmaalaha, faahfaahin badan ayaa si taxadar leh loo qaabeeyey.
Tijaabooyinka Neefsashada waxay ku saleysan yihiin falanqaynta dabeecadda waveform, oo ay weheliso aqoonsiga qaabka iyo aragtida shabakada neerfaha ee macmalka ah, iyadoo la adeegsanayo is-barasho iyo shabakad wax-is-barasho oo lakabyo badan leh, falanqaynta isku-xidhka calaamadaha kanaalka badan iyo teknoolojiyadda kale, waxay si weyn u wanaajisaa saxnaanta falanqaynta hurdada, neefsashada. falanqaynta, falanqaynta iwm.
Tijaabada Neefsashada waxaa loo maraa interface Windows-ka Shiinaha, falanqayn sax ah oo toos ah oo gunaanad ah, naqshadaynta hawlgalka bini'aadamka, ka dhig warbixinta falanqaynta neefsashada hurdo fudud oo hufan. Wuxuu ogaan karaa khuurada/hurdada/soojeedka-micro-sooca/dhacdooyinka neefsiga/ garaaca wadnaha/arrhythmia/kala duwanaanshaha garaaca wadnaha, samee warbixin gunaanad ah/warbixin neefsasho/warbixin oksijiinta dhiiga/cg warbixinta hurdada. Nidaamka la socodka neefsashada hurdada ayaa ah qalabka ugu saxsan ee lagu ogaado cilladda hurdada hurdada.
Tijaabooyinka Neefsashada waxay ku saleysan yihiin aragtida hurdada ee ugu dambeysay, iyo xasilloon, sax ah, hufan, mabaadi'da naqshadeynta habboon, laga soo bilaabo aragtida isticmaalaha, tiro tafaasiil ah oo la sameeyay nashqad faahfaahsan. Iyada oo ku saleysan falanqaynta dabeecadda waveform, oo ay weheliso aqoonsiga qaabka iyo aragtida shabakada neerfaha ee macmalka ah, iyadoo la adeegsanayo is-barasho iyo isku-dubarid shabakad wax-is-barasho oo lakabyo badan ah, falanqaynta isku-xidhka calaamadaha-channel-ka iyo teknoolojiyadda kale, waxay si weyn u wanaajisaa saxnaanta falanqaynta hurdada, falanqaynta neefsiga, ecg falanqaynta.
Qalabka Caafimaadka ee Qaaxada (TB) Qalabka Tijaabada Degdegga ah
Qalabka Caafimaadka ee Qaaxada (TB) Cajalad tijaabo degdeg ah: Baaritaanka shaqada sambabadu waa mid ka mid ah baaritaannada lagama maarmaanka u ah cudurrada neef-mareenka. Inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado dhufashada mareenka neefsiga iyo xajmiga awoodda sambabada. Si loo ogaado goor hore ee dhaawacyada sambabada iyo marin-haweedka, waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo darnaanta iyo saadaasha cudurka, qiimeynta waxtarka daawooyinka ama hababka kale ee daaweynta, iyo aqoonsiga sababaha dyspnea. Waa qiimo weyn oo caafimaad in la baaro goobta dhaawaca, la qiimeeyo dulqaadka shaqada sambabada ee shaqada ama xoogga foosha, lana socdo bukaanka aadka u xanuunsan.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabooyinka Neefsashada oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabooyinka Neefsashada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabooyinka Neefsashada la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.